Ungayithola kanjani noma usethe kabusha iphasiwedi ye-Gmail | Iforamu Yeselula
Ungayithola kanjani noma usethe kabusha iphasiwedi yakho ye-Gmail
U-Ignacio Sala | 16/09/2021 12:00 | Internet
Ukungakhumbuli noma ukulahlekelwa yiphasiwedi yanoma yimaphi amapulatifomu esivame ukuwasebenzisa kungaba yikhanda elincanyana noma elincane, ngokuya ngensizakalo nokubaluleka kwayo kithi. Ngenhlanhla, rukubuyisa iphasiwedi inqubo elula kakhulu.
Kulesi sihloko sizokukhombisa ungayithola kanjani noma uyithole kanjani iphasiwedi ye-Gmail. Ukungakhumbuli iphasiwedi ye-Gmail kungaba yinkinga enkulu kakhulu, ikakhulukazi uma sisebenzisa i-smartphone ye-Android ne-akhawunti esingakhumbuli ukuthi iphasiwedi ihlotshaniswa nefoni yethu.
Ungayisusa kanjani i-akhawunti yakho ye-Gmail ngokuphelele
1 Ungayithola kanjani iphasiwedi yakho ye-Gmail
2 Ungalithola kanjani kabusha iphasiwedi ye-Gmail
3 Phinda uthole iphasiwedi egcinwe esipheqululini
3.3 I-Microsoft Edge
4 Ungalokothi ulahlekelwe iphasiwedi yakho futhi
4.2 Umphathi wephasiwedi ye-LastPass
Ungayithola kanjani iphasiwedi yakho ye-Gmail
Into yokuqala okufanele sicace ngayo ukuthi, kuleli cala elithile, iGoogle awusoze wasithumelela iphasiwedi nge-imeyili. Ayikho ipulatifomu, ayikho nhlobo, ezosithumela iphasiwedi yethu nge-imeyili. Uma singayikhumbuli, izosimema ukuthi sakhe iphasiwedi entsha, iphasiwedi engakwazi ukufana naleyo ebesiyisebenzisa phambilini.
Izindlela ezi-9 ezinhle kakhulu ze-Gmail zokuphatha ama-imeyili
Ngaphandle kokuthi iphasiwedi ibhalwe phansi kwenye indawo, asisoze sakwazi ukubuyisa iphasiwedi, ngakho-ke sizophoqeleka ukuthi sakhe entsha. Ngokusobala, ukuze sakhe iphasiwedi entsha ehlotshaniswa ne-ID ye-Google, le ngxenyekazi kufanele iqinisekise ukuthi singabanikazi abafanele be-akhawunti, ngoba uma kungenjalo kungaba ngumsebenzi onzima ukweba amaphasiwedi we-akhawunti.
Lapho sibhalisela i-Gmail, njengakwezinye izingxenyekazi, thina basicela uchungechunge lwemininingwane lokho kuzosivumela ukuthi sibuyise i-akhawunti yethu uma sizithola sisesimweni esinjengalesi, ngakho-ke akufanele siqambe amanga sicabanga ukuthi iGoogle ifuna ukwazi okwengeziwe ngathi. Noma, kukhona ingxenye yeqiniso kuyo, lolo lwazi lusetshenziselwa ukubuyisa i-akhawunti uma sikhohlwe iphasiwedi.
para thola i-akhawunti yethu ye-Gmail bese udala iphasiwedi entsha, kufanele sifeze izinyathelo esikukhombisa zona ngezansi:
Into yokuqala okufanele uyenze ukuvakashela iwebhu gmail.com
Okulandelayo, sifaka ikheli le-imeyili lapho sifuna ukuthola khona iphasiwedi bese uchofoza ku-Okulandelayo.
Uma sinenhlanhla futhi isiphequluli sinephasiwedi egcinwe, izokhonjiswa ngokuzenzakalela ifihlwe ezinkanyezini. Uma kungenjalo, chofoza ku Ukhohliwe iphasiwedi?
Ngemuva kwalokho izokhombisa izindlela ezahlukahlukene zokubuyisa iphasiwedi yethu kuya ngokuthi sikwi-smartphone ye-Android, uma sifake inombolo yethu yocingo, uma sifake i-imeyili ukuthola iphasiwedi .. Kulesi sigaba, kufanele sikhethe inketho evumelana nezidingo zethu.
Kwesinye isikhathi, iGoogle ayisivumeli ukuthi sikhethe indlela yokutakula, futhi iyazenzekela. Owokuqala, uthumela ikhodi ku-Android smartphone lapho sisebenzisa khona iphasiwedi. Uma singasayisebenzisi, izothumela ikhodi yokutakula ku-akhawunti yesibili ye-imeyili
Lapho-ke, uma i-Google isiqinisekisile ukuthi singabanikazi be-akhawunti abasemthethweni, izosiphoqa ukuthi sikwenze lokho dala iphasiwedi entsha.
Kusukela manje, zonke izinhlelo zokusebenza namadivayisi eselula ahlobene nale akhawunti bazoyeka ukusebenza size sifake iphasiwedi entsha.
Ama-hacks angama-21 e-Gmail azokumangaza
Phinda uthole iphasiwedi egcinwe esipheqululini
Uma isiphequluli sethu sigcine iphasiwedi ye-akhawunti yethu yakwa-Google, asikho isidingo sokwakha iphasiwedi entsha, njengoba sikwazi ukufinyelela kuhlu lwamaphasiwedi agcinwa isiphequluli futhi sazi ukuthi kuyini.
KuFirefox, kufanele sichofoze emigqeni emithathu evundlile ukufinyelela imenyu bese ukhetha inketho Amaphasiwedi.
Ku-Chrome, chofoza amaphuzu amathathu amile ekhoneni eliphezulu kwesokudla, chofoza ku-Amasethingi. Ngaphakathi kwezilungiselelo, sifinyelela isigaba I-Autocomplete bese uchofoza ku Amaphasiwedi.
Ku-Edge, chofoza amaphuzu amathathu avundlile, atholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla, chofoza ku-Amasethingi. Ngaphakathi kwezilungiselelo, sifinyelela isigaba Amaphrofayli bese uchofoza ku Amaphasiwedi.
Kuzona zozimbili izimo, kufanele sicindezele ngaphezu kweso eceleni kwephasiwedi ekhonjisiwe efihlwe amachashazi ukuyikhombisa.
Ungalokothi ulahlekelwe iphasiwedi yakho futhi
Njengamanje, inani lamaphasiwedi okufanele siligcine emakhanda ethu liphezulu kakhulu. Sebenzisa iphasiwedi efanayo yokufinyelela kuwo wonke amapulatifomu kubeka ama-akhawunti ethu engcupheni, ngoba uma kwenzeka kuvuza idatha, abangani babanye bangasebenzisa igama lakho lomsebenzisi (imvamisa i-imeyili) nephasiwedi efanayo.
Futhi akunconywa yini ukusebenzisa amagama afana no-12345678, iphasiwedi, 00000000 ... iphasiwedi iphasiwedi minyaka yonke esetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi ngaphandle kwengozi yezokuphepha abayenzayo. Ukwakha iphasiwedi eqinile, kungcono kakhulu hlanganisa usonhlamvukazi, amagama amancane, izinombolo nezimpawu.
Ngokusobala, asikwazi ukukhumbula kalula lezi zinhlobo zamaphasiwedi, ngakho-ke okungcono kakhulu esingakwenza ukusebenzisa izinhlelo ukuphatha amaphasiwedi. Lezi zinhlelo futhi zisivumela ukuthi sakhe amaphasiwedi aphephile, ngakho-ke asidingi ukuchitha isikhathi ukuwakha.
Nalu uhlu lwezicelo ezinhle kakhulu zokuphatha amaphasiwedi:
Siqala ngalolu hlelo lokusebenza, ngokuba okuphelele kakhulu kunakho konke futhi utholakale kuyo yonke imvelo yamaselula neyamadeskithophu etholakala emakethe. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, singahlala sinamagama abasebenzisi namaphasiwedi wawo wonke amapulatifomu esiwasebenzisa njalo kwi-smartphone nakwikhompyutha yethu.
Ngaphezu kwalokho, kunakekela ngokuzenzakalela ukufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi, ngakho-ke kufanele sizikhombe kuphela kudivayisi ukuze sikwazi ukuyisebenzisa. Ukuze sikwazi ukujabulela yonke imisebenzi esinikezwa yi-1Password udinga ukukhokha okubhaliselwe kwanyanga zonke.
1Password - Umphathi wephasiwedi
Umthuthukisi: Inkampani AgileBits Inc.
Umphathi wephasiwedi ye-LastPass
I-LastPass iyi- umphathi we-password ne-generator okugcina amaphasiwedi ethu nolwazi lwethu lomuntu siqu ngokuphephile egumbini elingaphansi. Kule ndlwana ye-LastPass singakwazi ukugcina amaphasiwedi nokungena ngemvume, sakhe amaphrofayili wokuthenga online, sikhiqize amaphasiwedi aphephile, sigcine imininingwane yakho kumanothi ...
Ngenxa yeLastPass, konke okumele ukwenze ukukhumbula iphasiwedi yakho eyinhloko ye-LastPass njenge uhlelo lokusebenza luzoqedela ngokuzenzakalela ukungena ngemvume kuziphequluli zewebhu nezinhlelo zokusebenza ngokuzenzakalela, ngaphandle kokukopisha nokunamathisela amaphasiwedi kubhodi yokunameka yedivayisi yethu.
Umthuthukisi: I-LogMeIn, Inc.
Isiphathi sePhasiwedi seLastPass
UDashlane usivumela ukuthi sigcine amaphasiwedi, imininingwane yomuntu, siphathe amaphrofayli ukuze sithenge ku-inthanethi… Kusuka kunoma iyiphi idivayisi. Ngalolu hlelo lokusebenza singagcina inani elingenamkhawulo lamaphasiwedi, sivumelanise idatha namanye amadivayisi, sakhe amaphasiwedi aphephile ngenxa yomenzi we-password ...
Ngaphezu kwalokho, kusivumela ukungenisa yonke idatha yokungena ngemvume esiyigcina okwamanje kusiphequluli se-Chrome. IDashlane iyatholakala kweyakho i- landa mahhala futhi kufaka phakathi ukuthenga ngaphakathi nohlelo ukuvula zonke izici.
UDashlane - Umphathi wephasiwedi
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Internet » Ungayithola kanjani noma usethe kabusha iphasiwedi yakho ye-Gmail
Ungakhokha kanjani nge-Paypal ku-Amazon
Ungayisebenzisa kanjani i-NFC ku-iPhone nakumamodeli ahambisanayo